Musa Lose Focus Now
Ezahlukeneyo Format kunye Isincoko Imibuzo
Musa ukuxhala ukuba uphume uxakwe
Thatha Ixesha Yakho kwi-Exam afternoon
Wena ngaphezu kweminyaka emithathu apho! Yaye sele ibethe nje lo Level wokuchitha II. Kufuneka kube lula ukusuka apha ... ilungelo? Nangona Level II na isixa kakhulu izinto, kunjalo Level III ebonisa imingeni yalo. I’m here to help you get past these so you can finally complete your CFA® exam process.
Emva kweminyaka self ngaphandle kokuqhutywa ukufunda, amandla akho engqondo ukuqhubeka ayikho namandla ngendlela sebenzisa ukuba. Eli lixesha lokuba uzikhumbuze ukuba iseyisangene ukuba ugcine amehlo akho. Khangela le ndlela-ukuba kuyo ekuthini uhlale womelele kwaye bafunde ilungelo, eli lixesha lokugqibela uya kuza kufuneka wenze oku. Olu khuphiswano kwakhona icholachola, azinxibe ebusweni bakho umdlalo kwaye asebenzise best uhlolo mbumbulu ukuba ngenene ukulungiselela wena ukuba icandelo lokugqibela.
Zinto bit eyahlukileyo kwiNqanaba III, ngoko ke Sicebisa familiarizing wena nefomathi phambi kokuba uqale isifundo. Oku kuya konga ixesha isekubeni ngomhla yoviwo yi ifomati eyahlukileyo kwiseshoni yakusasa, leyo ibandakanya imibuzo eluhlobo lwezincoko-esekelwe. Iseshoni kwemini zeNqanaba III liyafana kwiNqanaba II kunye vignettes kunye umba-wamisa imibuzo.
Ifomati Isincoko iya kuba nzima ngendlela ekhethekileyo. Kukho iindidi ezimbini ezibanzi ezakha ingxenye isincoko: iimpendulo ezisekelwe ukubala kunye neempendulo igama ezisekelwe. Kuba iimpendulo ezisekelwe yokubala, kuya kufuneka ukuba ubonise wonke umsebenzi wakho ukufumana amanqaku ezininzi kangangoko unako. Iimpendulo izwi esekelwe lifune iimpendulo kwimibuzo ethile ebhalwe. Le elingumvi ufuna neengqikelelo ezingundoqo, akukho inoveli. Ekubeni le mibuzo "isincoko" zi- cacile, kuthatha nje imizuzu embalwa Ukubhala phantsi impendulo yakho. Feel free to use bullet points and informal essay organization, kodwa qinisekisa ukuba ngqo kwaye kangangokuba. kunjalo, Ukuba awuyazi impendulo, akusayi kufumana amanqaku ngokuzama ukufumana fancy kunye impendulo yakho ngokubhala ngezinye amagama obaziyo kakuhle.
I Siphakamisa ngamandla uqhelisela le imibuzo eluhlobo lwezincoko, ingakumbi xa ngokubhala ayikho enye amandla akho. Ngokuqinisekileyo ufuna ukusebenzisa i isikhokelo sokufunda le ngxenye. Oku kuya kukunceda ukhululeke ngakumbi nefomathi isincoko, bakusindise nexesha uviwo kanye.
Exam questions can ask about literally any part of the CFA® institute syllabus. Oku kunokuba kuba yingxaki kakhulu kuba multiple choice questions ukususela unako ukuzoba kwezinye iindlela sithandabuze eluncedo. Kodwa le imibuzo eluhlobo lwezincoko, oku kungaba yingxaki enkulu ukuba awuyazi impendulo.
Ungaxhalabi, oku kulindeleke ukuba kwenzeke. Nokuba uthe wafunda ngaphezu kwakhe nabani na, kuya kusoloko kukho icandelo encinane akazange kukugubungela kuni pops up on ukuhlolwa. Hlala uzolile kwaye yisa nje kwi-mngeni olandelayo kunokuchitha kwakhona ixesha.
Oku kunokuba kubacacele, kodwa imibuzo eluhlobo lwezincoko are sneaky. Le mibuzo iya kuzaliswa ulwazi olungenanto malunga namagama zabaxumi, zokuzalwa, kunye neentlawulo ngamanani ukuba kuya kufuneka ukuba anele ukuya uyakothusa lo mbuzo kufuneka uphendule ngokwenene. Oku kujongwe ukuba ukuvavanya intembelo yakho nangengqondo yakho lwengqiqo ungamnceda njani ngosuku lovavanyo. Emva kokuba ufunde umbuzo, qiniseka uyazi kakuhle indawo abaza ubhale impendulo yakho. Iimpendulo akubhalwanga na kwindawo efanelekileyo abayi zihlelwe. Ngoko ke, ukuba unalo ixesha uye emva kwaye kabini uhlole iimpendulo zakho, Qinisekisa ukuba sele endaweni elungileyo kakhulu.
Umgca entanjeni phambi, ngoko ke zendalo okukhawulezisa ukuze inkululeko iza ngokukhawuleza. Ngokwenza njalo, usenokugqibela ukuyeka uloyiso lwakho ngokuthi uthathe ixesha lakho ukuze aphendule imibuzo ngokuchanekileyo. Uviwo kwemini iya kuba ixesha elincinane ngokwentelekiso ndanyanzeleka kuba ngokwesiseko ifomati efanayo zeNqanaba II. As long as you can resist the temptation to rush through the last bit of the CFA® exam, uya kuba nexesha ukuqiniseka ukuba uphephe iimpazamo ezingeyomfuneko yaye ekugqibeleni abe CFA mvume®.